Nhazi usoro nri nri anụ ọkụkọ akpọnwụ akpọnwụ akpọnwụla
site na nchịkwa na 21-07-12
Ọkụkọ anụ ụlọ kpọnwụrụ akpọnwụ chọrọ igwe na-ehicha nkụ mgbe ọ na-eme ya. Dịka ọmụmaatụ, ọkụkọ pusi kpọnwụrụ akpọnwụ. Tupu ịme ọkụkọ, kwadebe ọkụkọ wee bee ya n'ime obere iberibe ihe dị ka 1CM, nwee oke dị gịrịgịrị, ka ọnụego nkụ ya dị ngwa ngwa. Tinye ya na friji akpọrọ L4 ...
Uru nke anụ nri nkịta anụ ụlọ
site na nchịkwa na 20-10-08
1.Adị mmiri nke anụ a mịrị amị erughị 14%, nke na -ahụ na ịdị arọ otu ngwaahịa nwere ike ịnwe nri karịa. N'otu oge ahụ, ọ na -ata ata ma na -ata, nke dabara na ọdịdị nke nkịta na -achọ ịdọka na ata 2. Mgbe nkịta na -anụ ụtọ ụtọ nke dri ...
Nkịta nwere ihe ngosi ndị a na -egosi "erighị ihe na -edozi ahụ", yabụ biko nye ha nri ngwa ngwa!
site na nchịkwa na 19-07-12
Ka ị na -azụ nkịta, onye nwe ya ga -ahụrịrị ihe mgbaàmà anụ ahụ nke nkịta ahụ, na inye ya nri adịchaghị enwe nri zuru oke. Mgbe nkịta na -adịghị eri nri, ihe ngosi ndị a ga -apụta. Ọ bụrụ na nkịta gị nwere Ọ bụrụ na ọ nwere, nye ya nri! 1. Nkịta dị gịrịgịrị I ...
Mkpa mkpa anụ ụlọ na -emeso anụ ụlọ
site na nchịkwa na 18-10-16
1. Isi ísì ga -akpali agụụ nkịta, ka nkịta na -anaghị amasị iri nri wee rie nke ukwuu. 2. Ọ dị mma ịzụ nkịta maka mmegharị ụfọdụ. Iji rie nri nrị, ha ga -echeta ngwa ngwa ụfọdụ mmegharị na omume ọma, nke na -enyere aka na ọzụzụ. 3. Anụmanụ ...
Korea amachibidoro ibubata akwa na ọkụkọ US
site na nchịkwa na 17-03-06
Mịnịstrị na -ahụ maka ọrụ ugbo, nri na ime obodo na -amachibido ibubata ọkụkọ (ọkụkọ na ọbọgwụ), anụ ọkụkọ (gụnyere anụ ụlọ na anụ ọhịa), àkwá ọkụkọ, àkwá oriri, na ọkụkọ si United States ruo na Machị 6 n'ihi ntiwapụ ahụ. nke nje na -efe efe nke ukwuu H7 na United S ...
FDA na -atụpụta iwu ọhụrụ maka nri anụ ụlọ
site na nchịkwa na 16-10-30
Nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ, FDA） na -atụpụta ụkpụrụ maka akụrụngwa ụlọ na nke mba ọzọ chọrọ ka edebanye aha n'okpuru Iwu Federal, Drug, and Cosmetic Act （FD&C Act） iji guzobe ihe achọrọ maka ezigbo nrụpụta nrụpụta ugbu a n'ichepụta, nhazi, p ...
Ụdị na ọrụ nke nri anụ ụlọ
site na nchịkwa na 15-06-06
Ngalaba na -ata nri: Ọ nwere ike na -egosipụta ike ịta ata nke anụ ụlọ gị, na -ata ezé anụ ụlọ gị, na -egbochi mgbako eze. Ngwaahịa ndị a nwekwara ike bụrụ ihe egwuregwu ụmụaka iji gbochie anụ ụlọ na -ata ihe n'ụlọ ebe niile. Nri anụ: Nri anụ bụ nri anụ ụlọ mara mma nke ọma. Ihe na -atọ ụtọ ...
Kedu otu esi ahọrọ nri dị mma maka nkịta?
site na nchịkwa na 14-07-12
Na mgbakwunye na inye nkịta nri bụ isi nri, anyị na -ahọrọkwara ha obere nri. N'eziokwu, ịhọrọ nri nri na-emetụta ahụ ike karịa. Kedu ka anyị ga -esi họrọ nri ụmụaka maka nkịta? 1. Akụrụngwa Mgbe ị na -ahọrọ nri maka nkịta, anyị nwere ike họrọ site na akụrụngwa. N'ikwu okwu n'ozuzu, ọ na -abụkarị ...
Nri kwesịrị ekwesị maka nkịta
site na nchịkwa na 13-05-09
Nke mbụ, chịkwaa oke nri nkịta, nri nkịta iji rie karịa ga -emetụta nri nkịta. Abụọ, enweghị ike dochie ya na nri nri nri, ọdịnaya nri na -edozi ahụ adịghị otu, dịka nri nri. Ya mere, ị gaghị edochi ihe nri maka nri. Atọ, ekwela ka nkịta zụlite ...
Okwu mmalite nke ọgwụgwọ anụ ụlọ akpọnwụ akpọnwụ
site na nchịkwa na 12-01-18
Teknụzụ na-ehicha nkụ bụ ịbelata anụ ọhụrụ dị ọhụrụ ngwa ngwa na ewepu ogo 40 Celsius wee kpọnwụọ ya. Nke a bụ usoro anụ ahụ. Usoro a na -ewepụta naanị mmiri sitere na ihe ndị dị na ya, a na -ejikwa ihe ndị na -edozi ahụ n'ime ihe eji eme ihe nke ọma. Ihe na-akpụ akpụ na-adịkwa ...
Nri ole na ole dabara adaba maka nkịta
site na nchịkwa na 11-08-11
Maka nkịta nwere anyaukwu, na mgbakwunye na inye nri nkịta kwa ụbọchị, onye nwe ya ga -enyekwa nkịta nri mgbakwunye nri n'otu oge, mana ọ nwekwara ike dozie agụụ. Taa Xiaobian ga -ewebata gị, dabara adaba maka nkịta iri “nri” ole na ole, ihe ụtọ ...
Ụlọ ọrụ: Qingdao Ole Pet Food Co., Ltd.
Ekwentị: +86 53286135522